UEFA oo go’aan rasmi ah ka soo saartay tartamada Champions League iyo Europa League – Gool FM
(Yurub) 13 Mar 2020. Xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay dib u dhigista dhamaan kulamada laga ciyaari lahaa isbuuca soo socda, tartamada UEFA Champions League iyo Europa League.
Go’aankan ayaa yimid kaddib markii uu si dhaqsi ah ugu faafay cudurka Coronavirus qaarada Yurub.
Sida lagu xusay bayaan ka soo baxay Xiriirka kubadda cagta Yurub ee “UEFA” waxaa gabi ahaanba dib loo dhigay kulamada lugta labaad wareega 16-ka Champions League iyo dhamaan kulamada kale 16-ka ee tartanka Europa League.
Xiriirka ayaa xaqiijiyay in go’aanada la xiriira taariikhaha cusub ee dib loo ciyaari doono kulamadan la shaacin doono waqtiyada soo socda.
Iyadoo la raacayo go’aanadan, waxaa sidoo kale la go’aamiyay in dib loo dhigo isku aadka wareega siddeed dhamaadka ee tartamada UEFA Champions League iyo Europa League, oo horey loo qorsheeyay in la sameeyo 20-ka bishan March.